၁.၁။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှသည် ကနဦးယူဆချက်သို့ - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> Chapters > အခန် > ၁။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း > ၁.၁။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှသည် ကနဦးယူဆချက်သို့
ထို့နောက်တွင် ကနဦးတွေးဆချက်များကို ကျကျနနမေးခွန်းထုတ်လျက် ထိုမေးခွန်းအား သင့်သတင်းက အဖြေပေးနိုင်, မပေးနိုင် စိစစ်ရမည်။ ထိုသို့စိစစ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအပိုင်းများအတွက် အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မည်။
! သက်သေပြချက်တွင် မည်သည်တို့ ပါဝင်သင့်သည်၊ မည်သည့် အထောက်အထားက ဆီလျော်မှုရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်။
! နယ်သတ်ခြင်းနှင့် ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် စုံစမ်းဖော်ထုတ် သတင်းရေးသားမှု အလုပ်ကို ကောင်းစွာစီမံကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။
! မိမိ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အခြားသူများ လက်ခံလာအောင် ပြောနိုင်ဆိုနိုင် အစွံထုတ်နိုင်မည်။
! ရရှိနိုင်သည့် အချိန်နှင့်အရင်းအနှီးများကို ပို၍ တိကျစွာ သတ်မှတ်ရှာဖွေနိုင်စေမည်။
! ခိုင်မာအားကောင်းသော သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းများ ချမှတ်နိုင်မည်။
သတင်းအကြောင်းအရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုင်းသည် နောက်ဆုံးသတင်းရေးသားချက် ဖြစ်လာစေမည့် ကနဦးယူဆချက်ပေါင်းများစွာ၊ ဦးတည်လမ်းကြောင်းများစွာကို ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာပြခဲ့သည့် ရေမသန့်စင်မှုကြောင့် ရောဂါကူးစက်ရသည့် ကနဦးယူဆချက်နှစ်ခုကိုကြည့်လျှင်
(က) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအဖို့ သောက်သုံးရေဝယ်ယူရန် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လွန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်မညီသည့် အခမဲ့ရေရင်းမြစ်များမှ ရယူသောက်သုံးကာ ဝမ်းရောဂါကပ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
(ခ) ပုဂ္ဂလိက ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရင်း ရေ၏လုံခြုံဘေးကင်းမှုပျက်ယွင်းကာ ဝမ်းရောဂါကပ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
မည်သည့်အကြောင်းများကြောင့် ထိုသို့ယူဆသလဲ၊ ထိုယူဆချက် မှန်,မမှန် သင့်ဘက်က မည်မျှသေချာသလဲ ဟူသည့် မေးခွန်းများဖြင့် ထိုကနဦးယူဆချက်နှစ်ခုကို ကျကျနန ချိန်ဆကြည့်ပါ။ ထိုကနဦးယူဆချက် နှစ်ခုလုံးသည် စစ်ဆေး အတည်ပြုရခြင်းမရှိသေးသည့် ကနဦးယူဆချက်များပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားသည်။ ကနဦးယူဆချက် (က) တွင် တရားဝင်မဟုတ်သည့် ရေအရင်းအမြစ်များက ပြဿနာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယူဆသည်။ ကနဦးယူဆချက် (ခ) တွင် ရေပေးဝေရေးကုမ္ပဏီက စံချိန်စံညွှန်းများကို ဂရုမစိုက်သောကြောင့် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယူဆသည်။ ထိုဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ရပ်လုံးကို သင့်အနေဖြင့် သေချာကြည့်ရပေမည်။ အကြောင်းမှာ ထိုကနဦးယူဆချက်များသည် ‘ဝမ်းရောဂါကပ်သည် မည်သည့်နေရာများတွင် စတင်ဖြစ်ပွားသလဲ’ ဟူသည့် ပို၍နက်ရှိုင်းသည့် မေးခွန်းပေါ် မူတည်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခင်ကနဦးယူဆချက်များထက် ပို၍ အားကောင်းသောတစ်ချက် ထွက်ပေါ်လာသည်။
(ဂ) x ဒေသ၌ မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သည့် ဝမ်းရောဂါကပ်သည် ပုဂ္ဂလိက ရေပေးဝေရေး သို့တည်းမဟုတ် တရားဝင် ခွင့်ပြုမထားသည့် ရေရင်းမြစ်များမှ စတင်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့ မွမ်းမံပြင်ဆင်လိုက်သည့် ကနဦးယူဆချက် ရလာသောအခါ မူလသတင်းကျောရိုးကို ပြန်ဦးတည်ကာ ပိုမိုရှင်းလင်း၍ မျှတသည့် စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
(ဃ) ရေပေးဝေရေးကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် x ဒေသ၌ ရေမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သည့် ဝမ်းရောဂါကပ် မကြာခင်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဤသတင်းသည် ထိုဝမ်းရောဂါကပ် မည်သို့စတင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိက သောက်သုံးရေများကို ဝယ်ယူရန် မတတ်နိုင်ဖြင့် မသန့်စင်သည့် မြစ်ချောင်း ရေတွင်းများမှ ရေအသုံးပြုသူများက စတင်ခဲ့သလား။ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ရေပေးဝေရေး ကုမ္ပဏီက ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာနိုင်ရန် ရေသန့်စင်မှုစံနှုန်းများကို လျှော့ပေါ့ထားခဲ့သောကြောင့် စတင်ခဲ့သလား။ ထို့နောက် ဝမ်းရောဂါကပ် ဖြစ်ပွားစေသည့် အကြောင်းအရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် စကားပြောရမည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ရပ်သူရွာသားများထံမှ သူတို့ နေ့စဉ် ရေရရှိပုံကို သတင်းလိုက်ရမည်ဖြစ်သလို ရေပေးဝေရေးစက်ရုံသို့ လွတ်လပ်သည့် ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် အတူသွားရောက်ကာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့် ညီမညီ စိစစ်ရမည်။ မည်သို့ ရောဂါစတင်ကူးစက်ကြောင်း တွေ့ရှိသည့်အခါ နောက်နောင်ထိုသို့ မဖြစ်ပေါ်စေရန် မည်သည်တို့ကို လိုအပ်ကြောင်း ရှာဖွေရပေမည်။
ကနဦးယူဆချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် သုတေသန အစီအစဉ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲရန် လိုပေသည်။ ထိုသုတေသန အစီအစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရမည်။
> သတင်းရင်းမြစ်များ ရှာဖွေခြင်း
> သက်သေပြရာတွင် ကိုက်ညီရမည့် အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
> နည်းနာဗေဒကို ရွေးချယ်ခြင်း
> အချိန်ဇယား သတ်မှတ်ထားရှိခြင်းနှင့်
> ကုန်ကျစရိတ် လျာထားတွက်ချက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဤအခန်းနောက်ပိုင်းတွင် ထိုအဆင့်တို့အား မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ရမည်ကို ခြုံငုံဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်၏ နောက်အခန်းများတွင်မူ ထိုတစ်ဆင့်ချင်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရကြောင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
စာအုပ်အဆုံးတွင် သင့်အနေဖြင့် ကျစ်လျစ်အားကောင်းသော သတင်းခေါင်းစဉ်ကြီးဖြင့် သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် အနှစ်ချုပ် ရေးသားနိုင်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုသတင်းခေါင်းစဉ်ကြီးရေးနိုင်ရုံဖြင့် မပြီးပါ။ သတင်းအကြောင်းအရာပေါ် အာရုံစူးစိုက်ကာ တည့်တည့်မတ်မတ် ရေးနိုင်စေမည့် လမ်းပေါ်ရောက်ရုံသာ ရှိပါဦးမည်။ သို့တိုင် သတင်းကို နိုင်နင်းစွာပုံဖော်လျက် သတင်းအဖွဲ့အစည်းမှ မည်သို့ ဆန်းသစ်မှုရှိရှိ တင်ပြနိုင်မည်ကိုမူ တွေးနိုင်လာပါလိမ့်မည်။ သေချာသည်ကတော့ ပို၍ မွှေနှောက်ရှာဖွေနိုင်လေ ပိုပြီး မွမ်းမံတန်ဆာဆင်နိုင်လေ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။